3D ပုံရိပ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ VOMMA သည် Pre-A + အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည် – Pandaily
3D ပုံရိပ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ VOMMA သည် Pre-A + အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
Jun 08, 2022, 21:20ညနေ 2022/06/08 23:07:03 Pandaily
Light Field 3D Imaging Technology Enterprise Womaယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ တန် သော Pre-A + ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးစီး ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ သဘောတူညီချက် Matrix Partners က သီးသန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Woma သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အလင်း ကွင်းဆင်း ပုံရိပ် စနစ်များကို ဦး ဆောင် သူဖြစ်သည်။ Shanghai Jiaotong တက္ကသိုလ် ကို မှီခို ပြီး Woma သည် optical field တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ် မှုများစွာ ကိုကျော် လွှား နိုင်ခဲ့ပြီး optical design, micro/nano processing နှင့် packaging အပါအ ၀ င် လိုအပ်သော နည်းပညာ ကွင်းဆက် များ၏အဓိက နည်းပညာများကို ကျွမ်းကျင် ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ချစ်ပ် များ၊ အလင်း ကွင်းဆင်း algorithms များ၊ 3D စက်မှုလုပ်ငန်း ဆော့ဖ်ဝဲ များနှင့်အခြား နယ်ပယ်များတွင် ကျွမ်းကျင် မှုများ စုဆောင်းခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ optical field ကင်မရာ စက်မှုလုပ်ငန်း စံချိန်စံညွှန်း များ ရေးဆွဲ ရာတွင် ဦး ဆော င်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန် များစွာသည် ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များစွာ ၏ စမ်းသပ်မှုနှင့် အတည်ပြုချက် ကိုအောင်မြင်စွာ အောင်မြင် နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် စက်မှုလုပ်ငန်း သုံး ဖောက်သည်များအား ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေး တိုးတက်စေရန် နှင့်စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် များ တိုးမြှင့် စေရန် ထိရောက်စွာ ကူညီ ခြင်းဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်း သုံး လိုင်း များစွာတွင် သုတ်လိမ်း ထားသည်။
VOMMA light field camera သည် light field ၏ 3D information recording ကို တစ်ကြိမ် တည်း တွင် လုပ်ဆောင် နိုင်ပြီး အထူး ထုတ်ကုန်များကို တိကျ မှန်ကန်စွာ စစ်ဆေး နိုင်သည်။ မျက်နှာပြင် စစ်ဆေးခြင်း နယ်ပယ်တွင် Woma ၏ light field ကင်မရာ သည် screen ခြစ် ခြင်းကဲ့သို့သော ချို့ယွင်းချက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပြီး screen defects များ၏ တည်နေရာ ကိုဆုံးဖြတ် နိုင်သည်။ ဒီ နည်းပညာ ၏အတွင်းပိုင်း ချွတ်ယွင်း မှု လွဲချော် မှုနှုန်းသည် ၀. ၁% အောက်သာရှိသည်။
ချစ်ပ် ထုပ်ပိုး ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း နယ်ပယ်တွင် Woma Light Field Camera သည် ဖောက်သည် များအနေဖြင့် disconnection နှင့် disconnection ကဲ့သို့သော micro defects ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ် ရန်ကူညီ သည်။ စမ်းသပ် ပြီးနောက် ၎င်း၏ UPH (တစ်နာရီ လျှင် ယူနစ်) သည် အပိုင်းအစ ၁၀၀၀၀ ကျော် အထိရောက်ရှိ နိုင်ပြီး လွဲချော် သော ထောက်လှမ်း မှုနှုန်းသည် ၀. ၀၁% အောက်သာရှိသည်။ လီ သီ ယမ် ဘက်ထရီ များတွင် Woma ၏ light field ကင်မရာ သည် ခြစ် ရာ ချို့ယွင်း ချက်များ ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို မီးမောင်းထိုးပြ နိုင်ရန် အမြင်အာရုံ အတားအဆီး များကို ကျော်လွှား နိုင်သည်။
လက်ရှိတွင် Woma သည် LF0104, LF0206, LF0312, LF0412 နှင့် LF0506 စသည့် အမျိုးမျိုးသော light field ကင်မရာ ထုတ်ကုန်များ ကိုစတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မူပိုင်ခွင့် ၅၀ ကျော်ကို လျှောက် ထားပြီး ၁၀ ခု ကျော်ကို လိုင်စင် ချ ထားသည်။ ၎င်းတို့ အားလုံးသည် optical field တွင်အဓိက မူပိုင်ခွင့် များဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Blue Ocean Robot A + + Round သည်ယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ ငွေကြေးထောက်ပံ့
Womar က ရရှိ လာတဲ့ ရန်ပုံ ငွေကို အဓိကအားဖြင့် စျေးကွက် ရှာဖွေ ရေးနဲ့ ထုတ်ကုန် လိုင်း အသစ် တွေ တိုးချဲ့ ရာမှာ သူ့ရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုကိုတိုးမြှင့် ဖို့အသုံးပြု မှာဖြစ်ပြီး စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်း န စ်၊ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ၊ VR/AR ၊ စွမ်းအင် အသစ် နဲ့ အာကာသ စတဲ့ 3D အလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေး ဈေးကွက် ရဲ့ အဓိက နေရာတွေမှာ အလင်း နယ်ပယ် ရဲ့ တိုးချဲ့ မှုကို အရှိန်မြှင့် ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Tags 3D imaging | financing | Matrix Partners | VOMMA
Bioprocessing ကုမ္ပဏီ MicroCyto သည် Angel ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၁၅ သန်း နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည်
Bioprocessing ကုမ္ပဏီ Microcells သည် အိန် ဂျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း) ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများမှာ Matrix Partners ဖြစ်သည်။
China Winds ကုမၸဏီ Sourceက Coscol Capital ကို ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကော်ပိုရေးရှင်းက အရင်းနှီးဆုံး ကုတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အင်္ဂါနေ့ကကြေညာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထိ မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်းအနှီးများစွာ အရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတချို့နှင့် ထောင့်စေ့သည့် တိရစ္ဆာန်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည်။
Industry Apr 06 ဧပြီ 6, 2021
China Weekly: ေဘးအႏၱရယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား
ယခုသီတင္းပတ္တြင္ “Chinese Gen Vick” အတြက္ AI Research Administration Solutions Provider ေရခဲKepryadi ကုမၸဏီက ယြမ္ေငြ ၂၂၈ ဒသမ ၂ သန္း ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး C2 Wheel Finance က ကင္ဆာႏွင့္ ခုခံအားစနစ္ ေရာဂါကုသေရး Developer Innova Biological Pharmaceကုမၸဏီအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆ သန္း ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး RoboticPlus. AI ထံမွ ယြမ္ေငြ သန္း ၂၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း BAI ႏွင့္ C Ventures ထံမွ သိရသည္။
Industry Apr 12 ဧပြီ 12, 2021